कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला की हैजा ? - Action Khabar - Nepali Online News Portal
कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला की हैजा ?
१० दिनसम्म आएन दिसा परीक्षणको रिपोर्ट
स्वास्थ्य कार्यालयले झाडापखालाका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा ४५ वर्षका पुरुषकाे घरमा, एक जना ७ वर्षीय बालकको निजी क्लिनिकमा र ५ वर्षीय बालिकाको अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ । तर समुदायमा थप तीन जनाको झाडापखालाको कारण मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा शिवराज नगरपालिका-८ कोटवाका एक महिला, कृष्णनगर नगरपालिका सुखरामपुरका २७ दिनको एक शिशु र बहादुरगञ्जकी एक महिलाको गर्भ तुहिएको छ । २७ दिने शिशुको निमोनियाको कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
- २६ आश्विन २०७८, मंगलवार ११:१० मा प्रकाशित